‘दुई मिनेटमै सबै भयो’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
‘दुई मिनेटमै सबै भयो’
यूएस बंगला विमान दुर्घटना
काठमाडौँ — यूएस बंगला विमानको फ्लाइट सेड्युलअनुसारै थियो । जहाजमा बंगलादेशको कोक्स बजारमा हुन लागेको कस्टमर सक्सेस समिटमा भाग लिन गएको हाम्रो टोलीका १० पर्यटन व्यवसायी र दुई बंगाली साथीलगायत रमाइलो गर्दै आइरहेका थियौं ।
न्युरोसर्जन डा. बालकृष्ण थापा र बंगलादेशमा डाक्टरीे पढाइ सकेर फर्किन लागेका विद्यार्थीको टोली पनि थियो । अरू पर्यटक पनि थिए । काठमाडौं उपत्यका छिरेपछि अवतरणका क्रममा जहाजले जुन रुट लिनुपर्ने हो, त्यो लिएन । कोटेश्वर आइसकेपछि दाहिने पट्टिबाट बढी च्यापेपछि जहाजले एयरपोर्ट ‘मिस’ गर्‍यो ।
सोच्यौं, टावरसँगको कम्युनिकेसनमै त्यसो गरेको होला । एयर ट्राफिकको समस्या हो कि भन्ने पनि लाग्यो । त्यसअघि पनि जहाज बूढानीलकण्ठ र बौद्ध वरिपरिका डाँडाकाँडा घुम्दै घर र रूख नै छोयोछोयो कि जसरी उडिरहेको थियो । सबै यात्रुमा त्रास छाइसकेको थियो । जीवन खतरामा पर्‍यो भन्ने सोचिसकेका थियौं । तर, कसोकसो पाइलटले जहाज ‘टर्निङ’ गर्दै एयरपोर्टतर्फ लगेपछि बाँचिन्छ कि भन्ने आस पलायो ।
तर, जहाज एक्कासि भुइँमा बज्रियो । धावनमार्गमा पुग्नै पाएन । त्यसपछि के भयो मलाई याद छैन । जब थाहा पाएँ, म चौरमा घिस्रिइरहेको थिएँ । जहाजभरि आगो सल्किसकेछ । पेट्रोलको फोहरा र धूवाँको मुस्लो छुटिरहेको थियो । अब जहाज पड्किन्छ र आगो आफूसम्म आइपुग्छ भनेर म आत्तिएँ । पछाडि फर्केर हेर्नै सकिनँ । छिटोभन्दा छिटो भाग्न खोजेँ तर खुट्टाले भरै दिएन । केही छिनमै सेनाका जवान आएर मेरो उद्धार गरे ।
मलाई केएमसी पुर्‍याइयो । त्यहाँको अवस्था लथालिंग थियो । त्यसैले आफन्तले नख्खुस्थित मेडिसिटी अस्पताल ल्याए । अहिले यहीँ उपचाररत छु । दाहिने घुँडाभन्दा तल फ्याक्चर भएको छ । दाहिनेतिरका दुई करङमा समस्या देखिएको छ । आँखामा थोरै इन्फेक्सन छ ।
दुर्घटनास्थलमा छँदा मलाई बाँच्छु भन्ने लागेकै थिएन । आफू जोगिए पनि पर्यटन व्यवसायी, डाक्टर भाइबहिनी र थुप्रै पर्यटकको मृत्यु भएकामा दु:ख लागेको छ । विमान किन दुर्घटनाग्रस्त भयो त्यो पछि थाहा होला । तर, पाइलटकै गल्तीले गलत ल्यान्डिङ भएको हो कि जस्तो लाग्छ । टेक्निकल कुरा भएकाले ठोकुवा नै गर्नचाहिँ सक्दिनँ । अवतरणका लागि फर्काएर ल्याउँदा दोस्रो पटकमा पनि सही ठाउँमा ल्यान्ड गर्न सकेन । जेजे भयो त्यो सब दुई मिनेटभित्रै भयो ।
(विमल खतिवडाले यात्रु केशव पाण्डेसँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
यूएस बंगलाको सोमबार दुर्घटनाग्रस्त विमानमा मृत्यु भएका २३ वर्षीय अवधेशकुमार यादवका बुवा ऋृषिनारायण राय पत्नी सिमित्राको आँसु पुछ्दै । चार महिनाअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार पुगेका अवधेश एजेन्टले भनेअनुसार काम नपाएपछि ढाका ‘ट्रान्जिट’ हुँदै स्वदेश फर्केका थिए । पशुपतिनाथको सँगै दर्शन गरेर सर्लाहीस्थित आफ्नो गाउँ फर्किने योजनाअनुसार उनले आमाबाबुलाई काठमाडौं बोलाएका थिए । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर
आयोगद्वारा छानबिन सुरु
यूएस बंगला विमान दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले काम थालेको छ । सरकारले सोमबार पूर्वपर्यटन सचिव यज्ञ गौतमको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।
‘आयोगले आजै (मंगलबार) देखि काम थालिसकेको छ,’ पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले मंगलबार त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘आयोगले दुर्घटना अनुसन्धान गर्दा आवश्यकताअनुसार विज्ञको पनि सहयोग लिनेछ । आयोगलाई १ सय ५० दिनको समय दिइएको छ । सहसचिव आचार्यले दुर्घटनाको छानबिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि हातेमालो गर्नेछौं ।
बेलायतले पनि सघाउने भनेको छ,’ आचार्यले भने । आयोगको कार्यालय सिंहदरबारस्थित पर्यटन मन्त्रालयमा राखिएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले दुर्घटनामा परेको बमबार्डियर ड्यास एट क्यु फोर हन्ड्रेड विमान दर्ता भएको मुलुक बंगलादेशबाट जहाजका प्राविधिक डकुमेन्ट झिकाइने बताए ।
उनले आयोगले जहाजको मर्मत, उडानयोग्य प्रमाणपत्रलगायत प्राविधिक डकुमेन्ट पनि मागिने बताए ।
अडियो सार्वजनिक भएकामा आपत्ति
यसैबीच, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) र पाइलटबीच भएको सवांदको अडियो बाहिरिएको विषयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आपत्ति जनाएको छ । प्राधिकरणले सोमबारै युट्युबलाई इमेलमार्फत उजुरी दिएको छ । ‘यो गम्भीर विषय हो । पाइलट र एटीसीको संवाद सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,’ महानिर्देशक गौतमले भने, ‘हामीले यो अडियो सार्वजनिक भएको विषयमा अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पनि भनिसकेका छौं ।’
गौतमले यस्तो अडियो आवश्यक परेमा सुन्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणका महानिर्देशक र दुर्घटना भएमा जाँचबुझ आयोगलाई मात्रै हुने बताए । यही अडियो सुनेर यूएस बंगला एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) इमरान असिफले विमान दुर्घटनामा पर्नुमा नेपाली एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरलाई दोष दिएका छन् । यसबारे प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमले एयरलाइन्सका सीईओको भनाइ आधारहीन भन्दै खण्डन गरेका छन् ।
‘सीईओको भनाइमा आधार छैन । जे मन लाग्यो त्यो भन्न पाइँदैन । हामीले पनि पाइलटको गल्ती भनेका छैनौं । दुर्घटना हुँदा देखिएको अवस्थाबारे मात्रै अभिव्यक्ति दिएका हौं,’ गौतमले भने, ‘यो विशुद्ध प्राविधिक कुरा हो । आयोगको अनुसन्धानपछि मात्रै खास कुरा भन्न सकिने छ ।’ पूर्वाधार र उपकरण अभावले यो दुर्घटना नभएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
‘यात्रु र उडानको चापअनुसार पूर्वाधारको आवश्यकता महसुस भएको पक्कै हो तर, सोमबारको दुर्घटनासँग यसको सम्बन्ध गाँसिएको छैन,’ गौतमले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट ६७ यात्रु तथा चालक दलका ४ सदस्यसहित आएको विमान अवतरणका क्रममा सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनामा परेको थियो । प्राधिकरणले दुर्घटनामा ४९ को मृत्यु भएको जनाएको छ । तर गृह मन्त्रालयले मृतकको संख्या ५१ पुगेको दाबी गरेको छ ।
बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमले चालक दलका क्याप्टेन अविद सुल्तानको मृत्यु नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमले यो दुर्घटनामा चालक दलका सबै सदस्यको पनि मृत्यु भइसकेको जनाएको छ । विमानमा ३३ नेपाली, ३६ बंगलादेशी, एक/एक चिनियाँ र माल्दिभ्सका नागरिक तथा चालक दलका चार जना थिए । सबै शव शिक्षण अस्पतालमा राखिएका छन् ।
२२ जनाको उपचार जारी
राजधानीका ६ वटा अस्पतालमा २२ जनाको उपचार जारी छ । विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षत्रीका अनुसार सिनामंगलस्थित काठमाडौं शिक्षण अस्पतालमा प्रिन्सी धामी, समिरा व्यन्जनकार, इम्रान कबिर, कबिर हुसैन, मेहेदी हसन, सोवर्णा हसन, सरिम अहमत, एमडी साहिन व्यापारी, सेख रुबायत रसित, आल्मुन नहर एनईको उपचार भइरहेको छ ।
त्यस्तै ग्रान्डीमा किशोर त्रिपाठी, हरिप्रसाद सुवेदी, दयाराम ताम्राकार, विनोद पौडेलको उपचार भइरहेको छ । न्युरो अस्पतालमा दिनेश हुमागाईं, मेडिसिटीमा केशव पाण्डे, ओममा रिजवानुल हकको उपचार भइरहेको छ । त्यस्तै नर्भिकमा वसन्त बोहोरा, आशिष रन्जित, सोनाम शाक्य, याकुव अली र रिजाना अब्दुल राखिएका छन् । यीमध्ये अधिकांश खतरामुक्त रहेको विमानस्थलले जनाएको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०७:४७
विवादित प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ लिने कि नलिने ?
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले नै अयोग्य ठहर्‍याएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट शपथ लिने कि नलिने भन्नेमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नैतिक संकट सिर्जना भएको छ । भण्डारीले पाँचवर्षे कार्यकालका लागि बुधबार शपथग्रहण गर्ने तयारी छ ।
सत्तारूढ दलका नेता र कानुनविद्हरूले विवादित व्यक्तिबाट राष्ट्रपतिले शपथ लिने अवस्था आउनु राम्रो नहुने भन्दै पराजुलीको राजीनामा वा बिदा बस्ने उपाय सुझाएका छन् । ‘विवादमा मुछिएका व्यक्तिले राजीनामा दिए हुने हो, तर नदिने हो भने बिदामा बसिदिए हुन्छ,’ एमाले नेता एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतको मुख्य व्यक्ति नै उहाँ हो, उहाँ नै विवादमा परेपछि नियमित काम गर्नु राम्रो होइन ।’
राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ लिने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश नभएको अवस्थामा कामचलाउ वा निमित्त प्रधानन्यायाधीशले पनि शपथग्रहण गराउन सक्छन् । त्यसैले पराजुलीले राजीनामा दिए वा बिदामा बसे वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा राष्ट्र्रपतिलाई शपथग्रहण गराउन सक्छन् । राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बुधबार शपथग्रहण गराउने बेलामा मुलुकमा जो प्रधानन्यायाधीश हुन्छ, उसैबाट राष्ट्रपतिले शपथ लिने बताए । ‘राष्ट्रपतिको शपथ प्रधानन्यायाधीशबाट हुने व्यवस्था छ, शपथग्रहण गराउने बेलामा जो प्रधानन्यायाधीश हुन्छ, उसैबाट शपथ लिने हो,’ उनले भने ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले शपथ गराउने प्रधानन्यायाधीशमाथि नै नैतिक रूपमा प्रश्न उठेपछि राष्ट्रपतिजस्तो पद र व्यक्तिको गरिमा कसरी रहन्छ भन्नेमा सरकार र दलहरूले निकास निकाल्नुपर्ने बताए । ‘यो प्राविधिक र नैतिक प्रश्न हो । प्राविधिक रूपमा जो पदमा बस्छ, उसको वैधता कायम रहन्छ । तर नैतिक रूपमा यति ठूलो प्रश्न उठिसकेपछि राष्ट्रपतिलाई जिम्मेवार बनाउन हुन्न, सरकार र सत्तारूढ दलहरूले यसको निकास निकालेर मात्रै शपथग्रहण गराउनु उपयुक्त हुन्छ,’ भट्टराईले भने ।
राष्ट्रपति सरकारले भनेअनुसार चल्ने संवैधानिक पद भएकाले यसमा सरकार र दलहरूले विवेक पुर्‍याउनुपर्ने उनको धारणा छ । विवादित व्यक्तिबाट शपथ लिने कि नलिने भन्ने विषयले सत्तारूढ दल र राष्ट्रपतिनिकट व्यक्तिहरूबीच पनि अनौपचारिक बहस भइरहेको छ । राष्ट्रपतिसमक्ष समेत प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले कुनै न कुनै रूपमा पराजुलीलाई बहिर्गमनको बाटोतर्फ लैजानुपर्ने सत्तापक्षका नेताहरूलाई दबाब छ ।
पार्टीभित्रैबाट समेत यस्ता धारणा आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पराजुलीको किर्ते प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई मंगलबार भेटेर चासो व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कानुनमन्त्रीसमेत रहेकाले आफ्नो विभागीय जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै उनले पराजुलीसँग पछिल्लो प्रकरणबारे कुराकानी गरेका हुन् । मंगलबार बिहानै प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबीच कुराकानी भएको स्रोतले जानकारी दियो । बालुवाटारनिकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पराजुलीलाई राजीनामा दिन, नभए बिदामा बसेर स्थितिको सहज निकास निकाल्न अनौपचारिक सुझाव दिएका छन् ।
तर पराजुलीले त्यस्तो नगरी मंगलबारसमेत नियमित कार्यालयमा उपस्थित भई सदाझैं इजलास तोकेर आफ्नो कामकाज गरेका छन् । उनले तोकेका इजलासमा आठ जना न्यायाधीश सहभागी भएनन् । पराजुलीको अयोग्यताको घोषणा गर्ने न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई भने उनले इजलास नै तोकेनन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश जबराले सोमबार पराजुलीले किर्ते गरेर उमेरको हद सकिएपछि पनि पदमा बसिरहेको भन्दै इजलासबाट आफ्नो राय सुनाएका थिए । पराजुलीको जन्ममितिअनुसार उनी गत साउनमै पदमुक्त भइसकेको घोषणा गर्दै जबराले कान्तिपुर र डा. गोविन्द केसीमाथि परेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको बृहत् इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए । जबराले पराजुलीको अयोग्यता घोषणा गर्दै इजलास बस्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरूले समेत पराजुलीलाई पद छाड्न सुझाएका थिए ।